Cakarta Surabaya Demiryolu Hayata Geçiriliyor | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာလောကASIA မှ62 အင်ဒိုနီးရှားဂျကာတာ Surabaya မီးရထားစတင်ပြေးဆွဲ
15 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 62 အင်ဒိုနီးရှား, ASIA မှ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း 0
Jakarta Surabaya မီးရထားကိုအကောင်အထည်ဖော်နေသည်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာဗားမြောက်ပိုင်းရှိ 720 km အားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီတို့ကဂျကာတာ - ဆူရာဘယာအကြားမီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရန်အတွက် Java မြောက်လိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ စီမံကိန်းအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုယခုနှစ်အစောပိုင်းက JICA မှစတင်ခဲ့ပြီး 2020 ကိုမေလကုန်တွင်ပြီးစီးရန်လိုအပ်သည်။
စီမံကိန်း၏အတိုင်းအတာအရ 160 km / h လည်ပတ်မှုကိုခွင့်ပြုရန်လက်ရှိကျဉ်းမြောင်းသောလိုင်းကိုတိုးချဲ့ပြီးမြို့ပြဒေသများတွင်တည်ဆောက်ထားသည့်ညှိနှိုင်းမှုအသစ်နှင့်အဆင့်ဆင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုများအားဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ခေတ်မီလိမ့်မည်။
24 စက်တင်ဘာလသဘောတူညီချက်အရစီမံကိန်းကို 436 မှဂျကာတာမှသည် Semarang သို့လည်းကောင်း၊ Semarang မှ Semburabaya မှ 2024 မှကီလိုမီတာကိုလည်းကောင်းစီမံကိန်းနှစ်ခုကိုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏အဆိုအရစီမံကိန်းပြီးစီးခြင်းသည်ခရီးသွားချိန်ကို ၁ နာရီခွဲခန့်လျှော့ချနိုင်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်5သန်းခန့်သည်နှစ်စဉ်မြို့ကြီးများအကြားခရီးသွားလာကြပြီး၊ နည်းပညာအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအေဂျင်စီကအနည်းဆုံးလေကြောင်းခရီးသည်အနည်းဆုံး 8 သည်ရထားလမ်းကိုဖြတ်ကျော်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
သမိုင်းဝင်မီးရထားပြန်လည်နေပါသည် 24 / 10 / 2013 Tarihi demiryolu yeniden hayata geçiriliyor :Kağıthane Belediyesi, 1915'te temelleri atılan tarihi demir yolu hattını yeniden hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Kağıthane Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, tarihi demiryolu hattını hayata geçirerek,…
Nusaybin-Habr မြန်နှုန်းမီးရထားစီမံကိန်းဘဝလွန်နေသည် 18 / 01 / 2016 Nusaybin-Habur Hızlı Demiryolu Projesi Hayata Geçiriliyor :PKK terörünün yakıp yıkmaya çalıştığı Güneydoğu Anadolu'ya yatırım projeleri devam ediyor. Her türlü tehdide rağmen Yüksekova'ya havalimanı yapan hükümet, çatışmaların sürdüğü Nusaybin'den Habur'a uzanan…
Nusaybin ရထားလမ်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည် 26 / 09 / 2017 Nusaybin မြူနီစီပယ် Nusaybin မီးရထားပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းနှင့်အတူအခြားgရာမစီမံကိန်းကိုသဘောပေါက်နေသည် ဤစီမံကိန်းနှင့်အတူခရိုင်၏မီးရထားကွင်းကိုသန့်ရှင်းပြီးလူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးကိုgörüntüဖြင့်ပျက်စီးစေသည်။
Antalya Ropeway Project မှဘဝကလွန်နေသည် 13 / 06 / 2012 Antalya için vizyon proje özelliğini taşıyan ve Sarısu bölgesi ile Tünektepe Döner Gazino arasına yapılacak olan teleferik için İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi’ne ihale yapma yetkisi verdi. Antalya İl…
Antalya ဘဝကပေးဖို့မျှော်မှန်းချက်စီမံကိန်း Feature ကိုကေဘယ်လ်ကားတင်ဆောင်လာသောလွန်နေသည် 13 / 06 / 2012 ပြည်နယ်အထွေထွေညီလာခံသည်အထူးစီရင်စုပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အားSarısuဒေသနှင့် Antalya အတွက်ရူပါရုံဖြစ်သည့်TünektepeDöner Gazino အကြားကျင်းပမည့်ကေဘယ်ကြိုးအတွက်တင်ဒါတင်ဒါရန်အခွင့်အာဏာပေးထားသည်။ အန္တာလီးခရိုင်…